Ọhụụ ụlọ ọrụ - Anshun AKF Medical Technology Co., Ltd.
-Vision Mission - Ozi Ọma
Dịka onye ndu gbasara ụlọ ọrụ na-ahụ maka usoro isiokwu, AKF chọrọ ịbụ otu n'ime ụdị ndị kachasị ewu ewu na ngalaba ọgwụ na ngwaahịa wee nye ndị ahịa teknụzụ na ngwa ahịa kacha mma. Anyị na-ele anya na-agwa gị okwu na mkparịta ụka zuru ụwa ọnụ ma na-atụle usoro mmepe kachasị elu nke ụlọ ọrụ na azịza na ọrịa zuru oke.
AKF ga-elekwasị anya na isi ụgbọ ala ya na ngalaba nke nwere ike ichekwa ihe mkpuchi, mepụta uru pụrụ iche maka ndị ahịa na-azụ ahịa usoro ihe omume na ọrụ ndị ọzọ agbakwunyere, ma bụrụ onye a na-apụghị ịgbanwe agbanwe nke ụlọ ọrụ bench-mark zuru ụwa ọnụ na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ ahụike na fieldof Anyị na-echiche nke solv-eme ọrụ nsogbu na-eme ka ọrụ adaba.
Nchụso nke AKF bụ "ahụmịhe ndị ahịa". nghọta kasị mma na meetthe mkpa nke ndị ahịa indifferent ahụ. anyị kwenyesiri ike na naanị miri emi ọkachamara ike nwere ike ulti-mately merie ogologo-oge ntụkwasị obi nke ndị ahịa na-ọkachamara ubi.
- ọhụụ ọhụụ -
Dị ka anyị niile maara, mmebi gburugburu ebe obibi emeela ka mmetọ ikuku na bacterialabuse Ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ kwa afọ na-anwụ site n'ọrịa iku ume na ọrịa ọrịa bacte-rial karịrị nde 20 n'ụwa. Masks abụrụla ihe dị mkpa na mgbasa a. Na nke a, ọ rụrụ ọrụ dị mkpa n'ịlụ ọgụ 2019-coronavirus. Ihe nkpuchi a na - ewepu AKF na nkpuchi kn95 bu uzo abuo nke na - ewepu mmebi nke oria mmadu nke nje, nje na ikuku ojoo site na mwakpo akpukpo aru na iku ume. Ha bụ ndị nlekọta nke ahụike mmadụ.
Companylọ ọrụ ahụ malitere ịbata na ụlọ ọrụ ihe nkpuchi na mmalite nke ntiwapụ nke ọrịa, ma bilie ngwa ngwa n'okpuru ọnọdụ siri ike. Ka ọ dị ugbu a, ihe nkpuchi usoro AKF na-abata n'ọtụtụ ahịa, na-enye ngwaahịa ndị magburu onwe ha maka ọha na eze iji guzogide ọrịa ahụ ma kpuchido ahụ ike.
AKF lekwasịrị anya na mkpa na nsogbu ndị ahịa, na-enye ndị ahịa ahịa ngwaahịa na azịza nke ndị ahịa anyị site na nrụpụta na mmeghachi omume ọsọ ọsọ, ha niile na-enyere ndị ahịa aka ịnweta nkwukọrịta mmekọrịta na-arụ ọrụ nke ọma.
AKF na-ewere mkpa ndị ahịa dị ka ọrụ ya, ma na-eme ka ọpụrụiche site na ntinye ego R & D na-aga n'ihu, na-aghọta ihe ịma aka ndị na-eche ihu na mpaghara nkwukọrịta ọkachamara mgbe niile ma na-ebute atụmatụ ọhụụ, na ịghọ ọkachamara ọkachamara ọkachamara.